Times24 Nepal » गोलभेडाको भाउ ५ वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च , प्रतिकिलो कति पुग्यो ?
गोलभेडाको भाउ ५ वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च , प्रतिकिलो कति पुग्यो ?
जेठ ०६, काठमाडौ ।
गोलभेंडाको भाउ ५ वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च भएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गोलभेंडाको मूल्यका विषयमा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। जनवरीदेखि अप्रिलसम्म गोलभेंडा आयात पनि बढेको छ। विभागले सन् २०१४ को मार्चदेखि २०१९ को अप्रिलसम्मको बजार अवस्थाबारे गरेको अध्ययनमा ५ वर्षको अवधिमा गोलभेंडाको मूल्य हाल सबैभन्दामाथि पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ। विभागले सरकारी स्वामित्वको कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समिति र भन्सार विभागको प्रतिवेदनका आधारमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदन विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनलाई बुझाइसकिएको छ।
मूल्य वृद्धिको कारण भने खुलाइएको छैन। विभागका तथ्यांक अधिकृत मोहनकुमार पुडासैनीका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा कुन समयमा कति माथिसम्म मूल्य पुगेको विषयमा मात्रै अध्ययन गरिएको हो। प्रतिवेदनअनुसार ५ वर्षको अवधिमा तीनपटक गोलभेंडाको मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको भेटिन्छ। प्रतिवेदनले असोजदेखि मंसिर १४ सम्ममा गोलभेंडाको मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको औंल्याएको छ। ५ वर्षमा चैतदेखि जेठ १ सम्ममा गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकिलो ४० देखि ८०को बीचमा रहे पनि यो वर्षको जेठ पहिलो सातादेखि नै मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको अध्ययनमा खटिएका तथ्यांक अधिकृत पुडासैनीले जानकारी दिए।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का वागवानी अनुसन्धान महाशाखाका वैज्ञानिक डा.सुरेन्द्र श्रेष्ठले तराईमा अत्यधिक चर्को तापक्रमका कारण गोलभेंडाको उत्पादन नभएको र उपत्यका वरिपरिका स्थानमा गत फागुनमा असिना पानीले नष्ट गरेको जानकारी दिए। बोटको फूल नै नष्ट हुँदा स्वदेशी उत्पादन बजारमा आउन नपाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार टनेलभित्र र टनेलबाहिर बाँचेका बोटबाट जेठको अन्तिम सातादेखि उत्पादन हुने गोलभेंडा बजारमा आउने र मूल्य घट्न सक्ने संकेत दिए। उनले भने, ‘यहीबेला भारतमा निर्वाचन परेको र निर्वाचनका कारण भारतमै उच्च मूल्य पुग्दा मागअनुसार नेपालमा आपूर्ति नहुँदा मूल्य वृद्धि भएको हो।’
आयात बढ्यो अभाव उस्तै सरकार, किसान, व्यवसायी र कृषि वैज्ञानिकले पछिल्लो समयमा भारतबाट थोरै परिमाणमा गोलभेंडा आयात हुँदा माग र आपूर्तिबीच तालमेल नमिल्दा मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको बताइरहँदा विभागकै प्रतिवेदनले अहिलेको चार महिनामा सबैभन्दा बढी आयात भएको पुष्टि गरेको छ। विभागको प्रतिवेदनले अनौठो तथ्यांकलाई उजागर गरेको छ। ४ वर्षको तुलनामा यो वर्षको पहिलो ४ महिनामा अत्यधिक परिमाणमा गोलभेंडा आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
२०१९ को जनवरीदेखि अप्रिलसम्ममा झण्डै ५७ हजार मेट्रिक टन गोलभेंडा आयात भएको छ। यो परिमाण भनेको सन् २०१८ मा वर्षभर आयात भएको गोलभेंडाको परिमाणभन्दा झण्डै ३८ प्रतिशतले बढी अहिलेको चार महिनाको अवधिमै आयात भइसकेको छ। सन् २०१८ को वर्षभरमा करिब ४२ हजार मेट्रिक टन, सन् २०१७ मा करिब १५ हजार मेट्रिक टन, २०१६ मा साढे २२ हजार, २०१५ मा साढे ११ हजार र सन् २०१४ को वर्षभरमा करिब १८ हजार मेट्रिक टन गोलभेंडा आयात भएको विभागको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।